Street Photography မှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှု ဘယ်လိုပေးမလဲ? – Featured Collectives
Article, Constructive Critique, Featured Collectives, Street Photography, StreetPhoto_Color, Thi Ha Thu, THT
ဓာတ်ပုံ – Fred Herzog
Street photography မှာ (ဒါမှမဟုတ် ဘဝရဲ့ ဘယ်အရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်) ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်လာဖို့အတွက် ရိုးသားပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှု ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအင်တာနက်ပေါ်က ပြဿ နာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာရုံပေးမှုအချိန်ဟာ တိုတောင်းပြီး Facebook/Flickr စတာတွေမှာ မှတ်ချက်ပြန်ပေးတာတွေ အများစုဟာ “ကောင်းလိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်”၊ “အလင်းရောင်ကျနေတာကို သဘောကျတယ်” ဒါမှမဟုတ် “ဘာကင်မရာ မှန်ဘီလူး သုံးထားသလဲ” စတဲ့ စာသားတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို ကြိုးစားဖော်ပြသွားပါမယ်။ အခြားသူများကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုပေးတာဟာ သူတို့ကို အကျိုးပြုရုံတင်မက ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကိုလည်း ပိုပြီးဝေဖန်ပိုင်းခြားလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာကို မသွားခင်မှာ “ဝေဖန်မှု”ဆိုတာကို အရင်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ အောက်က အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာ ဝီကီပီဒီယမှ ကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဖန်မှုဆိုတာ စည်းစနစ်တကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့ ရေးသားချက် သို့မဟုတ် ပြောစကားဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်မှုကို အပြစ်ရှာခြင်းနဲ့ အဆိုးမြင် သတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ယေဘုယျ နားလည်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝေဖန်မှုမှာ ကောင်းမွန်မှုကို အသိအမှတ်ပြုမှုလည်းပါပါတယ်။ အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဓလေ့တွေမှာတော့ စနစ်တကျ သံသယထားရှိမှုအဖြစ်လည်း အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ဝေဖန်မှုဟာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နဲ့ လူထု ငြင်းခုန်မှုတွေမှာ လက်ခံထားတဲ့၊ အတည်တကျရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ လူသားဆိုင်ရာတွေ၊ အထူးသဖြင့် စာရေးသားခြင်းမှာ ဝေဖန်မှုဟာ သိပ္ပံနည်းကျတဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရဲ့ လွမ်းမိုးမှုခံရပါတယ်။ ဝေဖန်မှုဟာ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ထင်မြင်ချက်မှာ အခြေခံပြီး ပုဂ္ဂလိကထင်မြင်ချက်ပေါ် အခြေမခံပါဘူး။ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ထင်မြင်ချက်ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိမှု၊ တစ်ကိုယ်ရည် သို့မဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိမှု၊ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု အဖြစ် လက်ခံထားပါတယ်။
၁။ ဝေဖန်မှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောဆိုငြင်းခုန်မှုမှာ အမှားအယွင်းရှာတာအဖြစ် သုံးပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ အကောင်းမြင်မှုပါဖို့မလိုအပ်ပေမယ့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုပေးဖို့ဆိုရင် အကောင်းမြင်မှုဟာ အရေးပါတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
၂။ ဝေဖန်မှုတစ်ခုဟာ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုအခြခံသင့်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်အမြင်ပေါ် ဘယ်တော့မှ အခြေမခံသင့်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ်ပေးတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ယခင်ကရှိခဲ့တဲ အတွေ့အကြုံတွေ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ နားလည်မှု ဒါမှမဟုတ် သင်ယူဖူးတဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေမှာ အခြေခံသင့်ပါတယ်။
ဦးနှောက်က ဝေဖန်မှုကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲသလဲ?
မှားတယ်လို့အပြောခံရတာကို ဘယ်သူမှ မကြိုက်ပါဘူး။ မကောင်းပြောတာကိုလည်း မကြိုက်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်မြင်ထားတာမပျက်ဖို့အတွက် တခြားသူတွေပေးတဲ့ ဝေဖန်မှုကို များသောအားဖြင့် မသိကျိုးကျွန်ပြုတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း street photography မှာ တိုးတက်ဖို့အတွက် ရိုးသားပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေမရှိရင် တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါမလဲ။ ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကို ဘယ်လိုပေတံနဲ့တိုင်းတာမလဲ။
ဝေဖန်မှု အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ဆိုတဲ့ အယူအဆရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဝေဖန်မှုပေးရာမှာ စစချင်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တုံ့ပြန်ချက်(အပေါ်က ပေါင်မုန့်) ပေးပါ။ နောက် ရိုးသားပြီး အရေးကြီးတဲ့ ဝေဖန်မှု (အလယ်က အသား) ပေးပါ။ အဆုံးသတ်အဖြစ် နောက်ထပ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မှတ်ချက် (အောက်က ပေါင်မုန့်) ပေးဖို့ပါပဲ။
ဝေဖန်မှုပေးရာမှာ နှစ်အချိုးတစ် (အပြုသဘော နှစ်ဆ၊ အဆိုးမြင်သဘော တစ်ဆ) ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ အဝေဖန်ခံရသူဟာ ဝေဖန်မှုကို စိတ်မဆိုးဘဲ သို့မဟုတ် ဝေဖန်မှုကို လုံးဝလက်မခံတာမျိုး မရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ စာကြောင်းလေးကြောင်းထက်နည်းတဲ့ အပြုသဘောဆောင်ဝေဖန်မှုပေးဖို့ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ “ကောင်းလိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်” “ကောင်းလိုက်တဲ့ အလင်းရောင်” “လှလိုက်တာ” စတဲ့ မှတ်ချက်တွေ၊ တုံ့ပြန်ချက်တွေဟာ လူတွေရဲ့ အတ္တကို ပိုကြီးထွားစေပြီး အလွယ်တကူပေးနိုင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် “မင်းဓာတ်ပုံမရိုက်တတ်ပါဘူး” “ဆိုးလိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ” စတဲ့ မှတ်ချက်တွေလိုပဲ ဓာတ်ပုံသမားအဖြစ်တိုးတက်ဖို့ရာမှာ အကျိုးမပြုပါဘူး။
မိမိကိုပြောဆိုဆက်ဆံစေလိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ တခြားသူတွေကို ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဘဝရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုကို ရလိုတယ်ဆိုရင် တခြားသူတွေပေးလာမှုကို စောင့်မနေပါနဲ့။ ကိုယ်ကစမပေးရင် မရပါဘူး။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုပေးတဲ့အချိန် စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ?
အခြားသူများရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဝေဖန်မှု ပေးတော့မယ်ဆိုရင် အောက်မှာဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေကို ထည့်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
၁။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေ ခဏမေ့ထားပါ
အခြားသူတစ်ယောက်ယောက်ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုပေးတဲ့အခါ မိမိစိတ်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ခဏမေ့ထားပါ။ အင်တာနက်ကနေတဆင့် ပေးတယ်ဆိုရင်လည်း အာရုံစူးစိုက်စိုက်နဲ့ ဝေဖန်မှုပေးနိုင်ဖို့ ကွန်ပျူတာမှာ တခြားပရိုဂရမ်တွေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ပိတ်ထားပါ။ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီး ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းခေါ်တာတွေကို မကိုင်ပါနဲ့။ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ။
၂။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ဝေဖန်ပါ
ပထမဆုံး ဓာတ်ပုံရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို စကြည့်ပါ။ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ။ အနည်းဆုံး တစ်မိနစ်လောက် အာရုံစိုက်ပြီး ကြည့်ပါ။ အောက်က မေးခွန်းတွေကို စိတ်ထဲမှာ မေးကြည့်ပါ။က) ဓာတ်ပုံနောက်ခံမှာ မထင်မှတ်ဘဲပါလာတဲ့လက်ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ပိုကောင်းသွားသလား၊ ကြည့်ရတာ ပိုရှုပ်ထွေးသွားသလား။ခ) ဓာတ်ပုံနောက်ခံမှာ ကြည့်ရတာကို ပိုရှုပ်ထွေးစေတဲ့ မော်တော်ကားတွေ ပါနေသလား။ (များသောအားဖြင့် ပါနေတတ်ပါတယ်။)ဂ) အဓိကအကြောင်းအရာက ဘာလဲ။ ဘယ်သူ့ကို ကြည့်ရမှာလဲ။ဃ) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကောင်းလား။င) ဓာတ်ပုံထဲမှာ အဓိကအကြောင်းအရာဆီကို ဦးတည်ခေါ်ဆောင်သွားမယ့် လိုင်းတွေပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် လိုင်းတွေက အဓိကအကြောင်းအရာကနေ သွေဖီသွားသလား။စ) အလင်းရောင် ကောင်းသလား။ဆ) ဓာတ်ပုံထဲမှာ ညီညွတ်မှုကို ဖော်ပြပေးမယ့် တြိဂံတွေပါသလား။ဇ) အမြင်ရှုထောင့် ကောင်းသလား။ ကလေးလေးပုံရိုက်တဲ့အခါ ကင်မရာကို အနည်းငယ်နိမ့်ရိုက်ရင် ပိုကောင်းသွားမလား။
၃။ အကြောင်းအရာကို ဝေဖန်ပါ
“အကြောင်းအရာ”ဆိုတာ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲကို ဆိုလိုတာပါ။ ဓာတ်ပုံရဲ့ဇာတ်လမ်းက ဘာလဲ။ ဓာတ်ပုံဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလား မကောင်းဘူးလား။
ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
က) ဓာတ်ပုံဟာ ကြည့်သူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ချက်ချက် ရနိုင်သလား။
ခ) ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဖြစ်ပျက်နေမှုတွေပါသလား။
ဂ) တခြားတစ်ယောက်ယောက်က ပုံစံတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာကို မြင်ဘူးသလား။
ဃ) ဓာတ်ပုံက မိမိကို ဘယ်လိုခံစားရစေသလဲ။ ပြုံးစေသလား၊ ရယ်စေသလား၊ ငိုစေသလား၊ မျက်မှောက်ကြုပ်စေသလား၊ ကြည့်ရတာ စိတ်ဓာတ်ကျစေသလား။
င) ဓာတ်ပုံဟာ စီးရီးစ် ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ပုံ အက်ဆေးတစ်ခုထဲမှာကော သုံးလို့ရနိုင်သလား။ တစ်ပုံတည်းအနေနဲ့ ကောင်းတာလား။
စ) ဓာတ်ပုံဟာ အမှတ်ရစရာကောင်းသလား။ ကြည့်ပြီး တစ်လ၊ သို့မဟုတ် တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာ ပြန်သတိရနိုင်မလား။
ဓာတ်ပုံကို သေသေချာချာကြည့်ပြီးပြီဆိုရင် ဓာတ်ပုံသမားကို “ရိုးရိုးသားသား ဝေဖန်ရမလား”လို့ မေးပါ။ ဒါက ဝေဖန်ခံရမယ့် ဓာတ်ပုံသမားအနေနဲ့ ကြားရမယ့် ဝေဖန်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ထဲမှာ ပြင်ဆင်ထားလို့ရအောင် အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ “ရိုးရိုးသားသား ဝေဖန်ပေးပါ”ဆိုလာရင် သူတို့ဟာ ပေးလာမယ့် အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုအချို့ကိုလည်း မျှော်လင့်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
၁။ မိမိရဲ့ ပထမဦးဆုံး ထင်မြင်ချက်တွေကို ပြောပါ
ဓာတ်ပုံကို ပထမဦးဆုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့ မိမိစိတ်ထဲ ဖြစ်သွားတာကို ပြောပါ။ ပုံကိုကြည့်နေစဉ် စိတ်ထဲက တွေးမိတာကို ပြောပြပါ။ ဥပမာ အောက်ကအတိုင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။“ဓာတ်ပုံကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြည့်တော့ ပုံထဲက အလင်းဆုံးနေရာကို ကြည့်မိတယ်။ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်ပေါ့။ နောက်တော့ ပုံထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲကို အတော်ကြာကြာ လိုက်ရှာကြည့်တယ်။ အဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ နောက်ခံကိုတွေ့တယ်။ နောက် အဓိက အကြောင်းအရာကို တွေ့တယ်။”
ပုံထဲက မိမိကို ပထမဆုံးစွဲဆောင်တဲ့အရာကိုပြောပါ။ နောက် မိမိမျက်လုံးက ပုံထဲမှာ ဘယ်လိုလိုက်ကြည့်တယ်ကို ပြောပါ။
၂။ အပေါ်က ပေါင်မုန့် (အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မှတ်ချက်)
ပုံတိုင်းမှာ အသိအမှတ်ပြုရမယ့် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်။ ဝေဖန်မှုတောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံသမားက ဘာလို့ ဒီပုံကို ရိုက်ရသလဲဆိုတာကို ကြိုးစားပြီး စဉ်းစားပါ။ အနည်းဆုံးတော့ တစ်ခုခု စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ ဒီပုံကို သူတို့ရိုက်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တာကို ပြောပါ။ ဓာတ်ပုံထဲက လူရဲ့ လက်ဟန်ပန်အမူအရာ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ နောက်ခံ ဒါမှမဟုတ် အရောင်တွေ ထပ်သုံးထားပုံ စတဲ့ မိမိကြိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြောပါ။
၃။ အလယ်က အသား (အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှု)
ဒါက ဝေဖန်ရာမှာ နည်းနည်း ရှုပ်ထွေးတဲ့ အပိုင်းပေါ့။ အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုဟာ ပေးသူအတွက်ခက်ခဲပြီး နားထောင်ရသူအဖို့လည်း ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစောပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း သူတို့က “ရိုးသားတဲ့ ဝေဖန်မှု”ပေးဖို့ သဘောတူပြီးဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ ရိုးသားမှုကြောင့် သူတို့ စိတ်ဆိုးဖို့ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး ဒီလိုရိုးသားတဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ဟာ အခုအခါမှာ ရဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ဓာတ်ပုံထဲက မိမိမကြိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာကို ပြောပါ။ ပုံထဲမှာ အားနည်းတဲ့အချက်ကို ပြောပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါတုံ့ပြန်မှုတွေကို ပေးလို့ရပါတယ်။
က) ဓာတ်ပုံနောက်ခံဟာ ရှုပ်ထွေးနေတယ်။ (ကျပန်း ဦးခေါင်းတွေ၊ လူတွေ၊ ကားတွေ အစရှိသဖြင့်)
ခ) အကြောင်းအရာက ပျင်းစရာကောင်းတယ်။ (ပုံထဲက အဓိကကျတဲ့လူဟာ တောင့်တောင့်ကြီး ရပ်နေတယ်။ လက်ဟန်ပန်အမူအရာ လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။ သာမန်အဝတ်အစားပဲ ဝတ်ထားတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မျက်နှာမှာ ခံစားချက်မရှိဘူး။)
ဂ) အကြောင်းအရာက ပုံအလယ်တည့်တည့်မှာ ရှိနေတယ်။ အဓိကအကြောင်းအရာဟာ ပုံရဲ့ ဘယ်ဘက် သို့မဟုတ် ညာဘက် နည်းနည်းရောက်နေတာကို ပိုသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်။ (Rule of thirds ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။)
ဃ) အလင်းရောင် အားမကောင်းဘူး။ ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကောင်းပေမယ့် အလင်းက တအားစူးနေပြီး highlight တွေ တအားများတာမျိုး (နေ့လည်ခင်းပိုင်းရိုက်တဲ့ ပုံတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်)။
င) ပုံဟာ တအား ရှုပ်ထွေးနေတယ်။ အကြောင်းအရာများစွာ ဖြစ်ပျက်နေပြီး ကြည့်ဖို့အတွက် ရှုပ်ထွေးလွန်းတယ်။
စ) ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ စီးရီးစ်တစ်ခုထဲမှာ ထည့်အသုံးပြုလို့ မရဘူး။ စီးရီးစ်ထဲက ပုံတစ်ပုံကို ဝေဖန်ခိုင်းရင် တခါတလေမှာ ပုံတစ်ပုံချင်းအနေနဲ့ကောင်းပေမယ့် စီးရီးစ်ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ မကိုက်ညီတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဆ) Post-porcessing တအား လုပ်ထားတယ်။ HDR ပုံစံ ပြန်ပြင်ထားတာမျိုး၊ vignette တအားထည့်ထားတာမျိုး၊ အရောင်တွေ oversaturated ဖြစ်နေတာမျိုး။ဇ) အရောင်က အာရုံပြောင်းစေတယ်။ ဓာတ်ပုံကို အရောင်နဲ့ရိုက်ရင် တခါတလေမှာ အရောင်က အာရုံပြောင်းစေတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် အနီ သို့မဟုတ် အဝါလို စူးရှတဲ့ အရောင်တွေဟာ ဓာတ်ပုံရဲ့ ဒေါင့်တွေမှာ ပါနေပြီး အဓိကအကြောင်းအရာက ပုံအလယ်နားရောက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့။
၄။ အောက်က ပေါင်မုန့် (အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မှတ်ချက်)
ဝေဖန်မှုကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ နိဂုံးချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံကိုကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းကို ပြန်ပြောပါ။ ပြီးတော့ ပိုကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ တွေးမိတာကို ပြောပါ။ ပုံဟာ တခြားသူတွေကို ပြနိုင်လောက်အောင် ကောင်းတယ် သို့မဟုတ် မပြဘဲ သိမ်းထားဖို့ မိမိထင်တာကို ပြောပါ။
စာရေးသားပြီး ဝေဖန်မှု နဲ့ နှုတ်နဲ့ ဝေဖန်မှု
စာရေးသားပြီး ဝေဖန်မှုနဲ့ နှုတ်နဲ့ ဝေဖန်မှုမှာ နှုတ်နဲ့ ဝေဖန်ခံရတာ ပိုနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ (အင်တာနက်မှတဆင့်) စာရေးသားပြီး ဝေဖန်မှု ပေးရင် ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ မိမိကြိုက်တာ မကြိုက်တာကို တိတိကျကျရေးသားပြဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်တာနက်ကတဆင့်ရေးတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုတိုတောင်းပါတယ်။
တစ်ယောက်ချင်းတွေ့ပြီး ဝေဖန်တဲ့အခါမှာတော့ ဒါဟာ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ အတွေအကြုံဖြစ်ပြီး ဝေဖန်မှုကိုလည်း အချိန်ပေးပြီး (နာရီဝက်၊ တစ်နာရီ ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပိုကြာအောင်) ပြောနိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ချင်းတွေ့ပြီး ဝေဖန်တဲ့အခါ မိမိပုံကို ကြည့်ပြီး သူတို့ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲဆိုတာကို သူတို့ရဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ရင်းလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ပုံက ပျင်းဖို့ကောင်းတယ်၊ ဘယ်ပုံက ဝေဖန်မယ့်သူ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ဝင်စားစေ တယ် စတာကို သိနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်မှာ ပြောတဲ့အသံကို ခွဲခြားလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်မှာ ဝေဖန်မှုကို အဓိပ္ပာယ်ကောက် လွဲတတ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းတွေ့ပြီး ပေးတဲ့အခါ ဝေဖန်တဲ့သူ ဘာကိုပြောချင်သလဲဆိုတာကို ပိုပြီး နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ရိုးရိုးသားသားပြောသလေား မပြောဘူးလားကအစပေါ့။
၁။ ဝေဖန်မှုကို တစ်ဝက်တစ်ပျက် မပေးပါနဲ့
အကြောင်းအရာနှစ်ခုကို တစ်ဝက်တစ်ပျက် မလုပ်ပါနဲ့။ တစ်ခုတည်းကို ပြီးပြတ်အောင် လုပ်ပါ။ဒါကြောင့် တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဝေဖန်မှုအများအပြားပေးမယ့်အစား ပြီးပြီးပြတ်ပြတ် ဝေဖန်မှုအနည်းငယ်ပဲ ပေးပါ။ အင်တာနက်မှာ (သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်း) ဝေဖန်မှုပေးဖို့အတွက် မိမိနဲ့ နီးကပ်သူ၊ လေးစားသူ၊ ဒါမှမဟုတ် အဆက်အသွယ်လုပ်လိုသူတွေထဲက အနည်းငယ်ကိုရွေးချယ်ပြီး တိတိကျကျရှိတဲ့ ဝေဖန်မှုပေးပါ။
“ကောင်းလိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်”လို့ မှတ်ချက်ပေးတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ စာကြောင်းလေးကြောင်းထက်ပိုတဲ့ ဝေဖန်မှုဟာ ဝေဖန်ခံရသူအဖို့ အင်မတန် တန်ဖိုးရှိပြီး အမှတ်တရဖြစ်စေမှာပါ။
၂။ ဝေဖန်မှုပေးဖို့ ဓာတ်ပုံအဖွဲ့ကို ရှာပါ
Flickr မှာ street photography group တွေရှိပြီး အောက်မှာ အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
က) Street Crit — The Home of Street & Documentary Critique ( https://www.flickr.com/groups/streetcrit/ )
ခ) HCSP Image Critique Thread ( https://www.flickr.com/groups/onthestreet/discuss/72157626470514033/ )
ဂ) Grit & Grain ( https://www.flickr.com/groups/gritandgrain/ )
ဃ) Streettogs Critique Group ( https://www.facebook.com/groups/493379377346282/ )
၃။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုကို တောင်းခံပါ
မိမိပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှု လိုချင်ရင် တောင်းခံရပါမယ်။ ဓာတ်ပုံကို Flickr, Facebook, Google+, Twitter, Instagram, 500px စတဲ့နေရာတွေမှာ တင်တဲ့အခါ ဝေဖန်မှုပေးဖို့ ပြောပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုပေးဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဆောင်းပါးရေးသူ (Erick Kim) ရဲ့ အကြံပေးချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဖန်မှုပေးတဲ့အခါ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိကို သူတပါးက မလုပ်စေချင်တာမျိုး မိမိကလည်း သူတပါးကို မလုပ်မိစေဖို့ သတိပြုစေလိုပါတယ်။
ရိုးသားပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် သူတပါးက မိမိကို မပေးခင် မိမိက စတင်ပေးပါ။ မိမိက ပေးတဲ့ ဝေဖန်မှုရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့တူညီတဲ့ ဝေဖန်မှုမျိုးကိုသာ ပြန်ရမယ်ဆိုတာကို မျှော်လင့်ထားပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုပေးရာမှာ (အထူးသဖြင့် တခြားသူများက ဝေဖန်ဖို့ အထူးတလည် မတောင်းတဲ့အခါမျိုး) ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
ဝေဖန်တဲ့အခါ လူတိုင်းကို အက်ဆေးတစ်ပုဒ်စာ ဝေဖန်ရမယ်လို့လည်း မဆိုလိုပါဘူး။ အရေအတွက်နည်းနည်းနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဝေဖန်မှုပဲပေးပါ။ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဝေဖန်မှု မပေးပါနဲ့။
Eric Kim ၏ “How To GiveaConstructive Critique in Street Photography” ကို ဆီလျော်အောင် မြန်မာပြန်သည်။